केपी ओलीलाई ठुलो थ्रे’ट आएको छ, दबाबमा परेर संसद बिघटन गरेका हुन – Onlines Time
December 23, 2020 onlinestimeLeaveaComment on केपी ओलीलाई ठुलो थ्रे’ट आएको छ, दबाबमा परेर संसद बिघटन गरेका हुन
प्रधानमन्‍त्री तथा नेकपाका अध्यक्ष केपी ओलीले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव नेपालहरू कार्यकर्ताको जगमा र जनताको विश्वासको जगमा चल्न नसकेको ओरोप लगाएका छन्।
बालुवाटारमा मंगलबार आफ्नो पक्षका केन्द्रीय सदस्यहरूको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले भने, उहाँ (प्रचण्ड-माधव) हरु त मान्नुभएन । उहाँहरु बेग्लै संसारमा, बेग्लै सपनामा, कसले हालेको ब्याट्रीबाट चल्दै हुनुहुन्छ ? कसले दिएको पम्पबाट चल्दै हुनुहुन्छ ? मलाई थाहा छैन । तर, उहाँहरु यस धर्तीमा, यस धर्तीको भूमिमा, यस धर्तीको जगमा, कार्यकर्ताको जगमा र जनताको विश्वासको जगमा चलिरहनुभएको छैन । अहिलेको आवश्यकताको जगमा उहाँहरु चलिरहनुभएको छैन।’
ओलीले नयाँ पार्टी जीवनतर्फ अगाडि बढिरहेको बताउँदै भने, अहिलेसम्म विधिवत पार्टी एकता विभाजित छैन । हामी पार्टी विभाजन गर्न पनि चाहदैनौं । निर्वाचन हुँदा पार्टी फुट्छ ? निर्वाचन हुँदा पार्टी फुट्नुपर्छ ? झन् एकजुट भएर बढ्नुपर्दैन ?
उनले यो घटनाक्रमले चुनावमा केही असर नगर्ने दाबी गर्दै भने, ‘मैले चुनाव अगाडि भनेको थिएँ, अब वामपन्थीको अत्यधिक बहुमतको सरकार बनाउँछौं । त्यो हामीले गर्‍यौं । अब कमरेडहरुमा चिन्ता लाग्ला, त्यो चिन्ता नलिन म आग्रह गर्छु । पुराना पातहरु झर्ने, नयाँ पात पलाउने क्रम भइरहन्छ । हामीले नचाहँदा पनि हुन्छ ।’
पार्टी एकतापछि महाधिवेशन गर्ने र एकतालाई संस्थागत गर्नेतिर भन्दा पद र सत्तातिर केही साथीहरू केन्द्रित भएको आरोप लगाउँदै ओलीले भने, ‘हामीले एकीकरण गर्‍यौं । तीन महिनाभित्र एकीकरणको काम टुंग्याउने निर्णय गरेका होइनौं ? त्यो तीन महिना कहिले आउँछ ? त्यतापटि्ट कहिल्यै ध्यान गएन । दुई वर्षभित्र महाधिवेशन गर्ने भनेका हौं । गएको जेठ ३ गतेभन्दा उतै महाधिवेशन सम्पन्न भइसक्नुपर्ने हो । सम्भवतः विधानको धारा १७ मा होला । तर, महाधिवेशन गर्नेतर्फ कुनै सोच छैन । कुनै चिन्ता छैन । तयारी छैन ।त्यसबाहेक, महाअभियोग लगाउने, अविश्वासको प्रस्ताव राख्ने, केन्द्रीय कमिटीबाट अध्यक्ष निकाल्ने, अरु नेताहरु निकाल्ने, यो बाटोतिर पो खेती गरिराख्नुभएको छ । पार्टी एकता, एकीकरण टुंग्याउने, एकीकरणको बाटोबाट अघि बढ्ने होइन, बरु उहाँहरु भत्काउने । कसैलाई निष्काशन गर्ने, कसैलाई कारबाही गर्ने । कुदेर राष्ट्रपति कहाँ पुग्ने । कुदेर सभामुखकहाँ पुग्ने । कुदेर कहाँ पुग्ने । यही प्रकारको खेती ।
चुनावमा कम्तिमा ५० लाख लोकप्रिय भोटसहित बहुमत ल्याउने दाबी गर्दै ओली भने, ‘त्यसकारण हामीले निश्चित समयभित्र लगभग ११ महिनाभित्र अब महाधिवेशन गरिसक्ने विचार गरेका छौं । हामीले चुनावमा पनि जानु छ यसपछि । अब हामी चुनावको तयारीमा जुट्छौं । चुनावमा जान्छौं ।हामी चुनावपछि अरु कामहरुलाई बढी व्यवस्थित गर्नु छ । चुनाव अगाडि हामीले कमिटीलाई व्यवस्थित गर्नेर्, विभागहरुलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने, मातहतका कमिटीहरुलाई पुनर्गठन गर्ने यावत कामहरु गर्नुपर्ने अवस्था छ । यी सबै कामहरु गरेर हामी चुनावका लागि तयारी गर्छौं ।चुनावमा हामीले कम्तिमा ५० लाख लोकप्रिय भोट ल्याउनुपर्ने छ । समानुपातिकमा यति ल्याउनु छ । त्यो ५० लाख भोट हामीले ल्याउनु छ । हामीले दुई पार्टी मिलेर ११६ सिटमा जितेका थियौं । ११६ सिटमा जितेका थियौं भने अहिले त्यसमा ४ सिट थप्नु पर्ने छ । १२० सिट पुग्नु पर्ने छ ।’
अब चुनाव केन्द्रित अभियानलाई आँधी तुफानका रुपमा हाँकेर लैजाने दृढता व्यक्त गर्दै उनले भने, ‘हाम्रो अभियान कुन हिसावले हामी सञ्चालन गर्न सक्छौं, हाम्रो सफलता त्यसमा निर्भर रहन्छ । हामी एउटा आँधी तुफानका रुपमा राष्ट्रिय राजनीतिलाई अगाडि बढाएर लिएर जाँदैछौं । आँधी तुफानका रुपमा हाँकेर लिएर जाँदैछौं । हामी राजनीतिमा सम्पूर्ण ढंगले समर्पित भएर काम गर्छौं । र, हामी सही विचारको, सही उद्देश्यको तागत दुनियाँलाई देखाउँछौं । हामी हाम्रो एकताको बलको, एकतावद्ध सक्रियताको तागत देखाउँछौं । हाम्रो व्यापक पार्टी पंक्तिको परिचालन, त्यसको तागत देखाउँछौं । हामी त्यसैगरी जनपरिचालन गर्छौं । त्यसको तागत हामी देखाउँछौं । देशभक्तिमा के तागत हुन्छ ? राष्ट्रवादमा के तागत हुन्छ ? राष्ट्रिय स्वाभिमानमा के तागत हुन्छ ? त्यो हामी देखाउँछौं । हाम्रो स्वच्छता कायम गर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र निर्मूलन गर्ने हाम्रा इमान्दार उद्देश्यहरुको तागत र सुशासन, शान्ति कामय गर्ने हाम्रा नीति र व्यवहारको तागत के हुन्छ, हामी देखाउँछौं ।’
नयाँ परिस्थितिमा केन्द्रीय समितिलाई पुनर्गठन गरेर विस्तार गर्नुपरेको बताउँदै ओलीले भने, ‘ अब यसपछिको परिस्थितिको हामीले कसरी सामना गर्ने ? उनीहरुले निहुँ त अगाडिदेखि खोजिरहेकै थिए, अब झन उनीहरुले निहुँ बनाउँछन् । त्यो निहुँ बनाएर पार्टी विभाजन गर्न खोजिरहेका छन् र प्रयास गरिरहेका छन् । परामर्श पनि नगरेर अध्यक्षलाई निस्कासन गर्ने आदि इत्यादि गरिरहेका छन् । महाधिवेशन गर्नुपर्ने, गरिरहेका छैनन् । त्यतापटि्ट लागिराखेका छैनन् ।
त्यसैले आगामी अभिभाराहरु पूरा गर्न सक्ने गरी कमिटीलाई थपेर विस्तार, अर्को भाषामा भन्ने हो भने पुनर्गठन गरेर विस्तार हो यो ।मैले ४४१ केन्द्रीय कमिटी, २ जना आमन्त्रित केन्द्रीय सदस्य र ४ जना पछि थपियो । ४४७ जना पहिले केन्द्रीय सदस्य र ५५६ जना मैले हिजो मनोनयन गरेका केन्द्रीय सदस्य गरेर १००३ जनाको केन्द्रीय कमिटी बनेको छ । १९६ जना खाली राखेर ११९९ जनाको कमिटी बनाइएको छ । यो कमिटी पछि हेरफेर हुन्छ ।तसर्थ ११९९ जनाको केन्द्रीय कमिटी हुनेछ । ४४७ पहिलेको र २०७७ पुस ६ गते मैले प्रथम अध्यक्षको हैसियतले आन्दोलनको बृहत्ततर हितलाई ध्यानमा राखेर मनोयन गरेका ५५६ जना गरेर यतिबेला १००३ जना मौजुद छौं । पहिला पनि कमिटीहरू यसरी नै बनिसकेपछि स्वअनुमोदन गरिएको हो । अहिलेसम्म भएका कमिटीहरू पनि संक्रमणकालीन कमिटी हुन् ।
ललितपुरमा यो के भयो ? श्रीमतीको सलमा लगाए पा सो, कसले झुण्ड यो बाथरुममा ? धारामै यस्तो हुन्छ ?
कमाउन गएका छोरा पा`गल भएर घर फर्किए ,८० बर्षिय आमाले अरुको घरमा काम गरेर छोराछोरी पाल्दै ,कठै यस्तो छ अवस्था (हेर्नुस् भिडियो )
घरमा लगेको दुध यस्तो भएपछि | दुधमा के मिसाएको हो ? यस्तो कसरी हुन्छ? ग’म्भिर लापरबाहि हो ? भिडियो हेर्नुहोस् र (जनचेतनाका लागि सेयर गराै)
May 26, 2021 onlinestime
भर्खरै ड’रलाग्दो बाढी पहिरो गयो, हजारौं घर डुबानमा, ४० ज’नाको मृ*त्यु, घर गाडी सबै बगायो | Badhi Pahiro (भिडियो हेर्नुहोस)